Ubuchwepheshe Isigamu sempilo: Ayikho i-Bootstrap
NgoMsombuluko, Februwari 28, 2011 NgoMsombuluko, Mashi 7, 2011 Nick Carter
Ngingathanda ukususa amahemuhemu ambalwa. Angiphikiswa izimboni ezinkulu. Angicabangi ukuthi abatshali bezingelosi bangamademoni ngempela. Angicabangi nokuthi wonke umuntu kufanele noma angakwazi “ukuvula” ibhizinisi labo ngempumelelo. Ukukufakazela lokho, ngithanda ukukutshela ngesizathu esingu- # 1 sokuthi wena nabalingani bakho ningadinga ukuqala ngokungenamahloni ukukhuthaza umbono wakho webhizinisi ophekwe kuhhafu kunoma ngubani onemali ongayonga: Half-Life.
Njengoba nje igama elithi “ukuqala” seliye lafana imali yokuthengisa, ngakho-ke iye yafana futhi ne- “techie.” Mhlawumbe kukhona ukuxhumana lapho. Ukuvumelana okujwayelekile ukuthi ukuqala okusha cishe ngaso sonke isikhathi uhlelo lokusebenza lwewebhu, ulwazi lomphakathi, noma ikhompyutha elingana nekhanda likaphini. Manje, lokho akulona iqiniso ngaso sonke isikhathi. Kepha, ukube bekunjalo, kuzofanela ngishise okwami ibhuku futhi bavume ukuthi zonke iziqalo (ngokubona ukuthi zisebenza kanjani [ngokuzenzisa] konke okuqhutshwa ubuchwepheshe) kufanele zipholishe iphimbo labo kuma-VC futhi zibe matasa.
Ubuchwepheshe yinkambu ekhula ngokushesha. Ngiyethemba leyo nkulumo ayithusi muntu. UMthetho kaMorey isitshela ukuthi ubuchwepheshe buphindeka kabili njalo eminyakeni emi-2 (noma ngabe kusho ukuthini lokho). Kepha isivinini okumele ukuqala kokuqalisa sikhathazeke ngaso akusona isivinini lapho ama-processor athuthuka khona noma izindleko ze-RAM zehla. Isivinini lapho ukuqala okuhlobene nezobuchwepheshe kudingeka sikhathazeke khona ngejubane lapho umbono wabo ulahlekelwa khona ubusha bawo. Kuyisivinini sempilo yengxenye yokuqala.
Uma usebenzisa umkhiqizo, ukhungatheka, bese ucabanga indlela ongawenza ngayo kangcono, khona-ke kunesilinganiso odinga ukusinquma: Kuzongithatha isikhathi esingakanani ukwakha lo mkhiqizo, ukuya emakethe, bese ukwakha isisindo esibucayi? Ngemuva kwalokho, zibuze ukuthi ngabe ukhona yini oyonakekela ngalelo phuzu. Ngokuzimisela! Ngabe ukhona onganakekela ukuthi uphelelise ubuciko bokuhlanza ikhanda i-VHS uma kukuthathe iminyaka eyishumi ukuthola isabelo semakethe? Ngabe ukhona okhathalelayo nge-headset yakho ehlehlekayo uma izinyo eliluhlaza lishaya ngokujwayelekile? Lobu ubuchwepheshe obunganqotshwa, hhayi yinoma yimuphi umuntu oncintisana naye, kepha yingxenye yempilo. Emjahweni wabantu wow, balahlekile.
Uma kukhulunywa ngobuchwepheshe bokumaketha, ngicabanga ukuthi ngingasho ngokuphepha ukuthi "ezenhlalo" ngandlela thile ziyizwi le-buzz kulezi zinsuku. Futhi ezenhlalo zishesha ngokungaboni. Izinguquko zomphakathi nsuku zonke. Futhi, ngaphandle kwezimo zemibono "yokusakazeka" kwegciwane, izindleko zenhlalo nazo, futhi. Ezenhlalo azikhululekile. Awukwazi ukuhlela ukudala isimo senhlalo ngaphandle kokucindezelwa okuthile… hhayi ngokushesha. Isivinini, ngemuva kwakho konke, yigama lomdlalo.
Ngakho-ke, awukwazi nini i-bootstrap it? Uma umkhiqizo wakho wakhiwe endaweni yokuxhumana (i-Twitter noma i-Facebook) thola imali. Uma ubuchwepheshe bakho buncike ebuthakathakeni bobunye ubuchwepheshe (njengabahlanza ikhanda noma amasethi angenazintambo angenazandla) thola imali. Uma wesaba ukutshela noma ngubani ngombono wakho (kufakwe abatshalizimali) ngoba wesaba ukuthi bazokweba, bese uthola imali. Qagela ukuthi yini, kuzofanele utshele umuntu kungekudala noma kamuva ukuze uthole amakhasimende, futhi uma lokho kukuhle impela, omunye umuntu uzokukopisha futhi akusebenzise VC ukukulandela ngokushesha ukumaketha nokusheshisa ukwedlula kuwe ngesabelo semakethe. Uma isivinini singakushaya, kuzodingeka ube nejubane.